Feesgwọ ọrụ maka nhazi maka nhazi nke nhazi nke OSF - AfricArXiv na-aga n’ihu ọrụ ya - AfricArXiv
Mepee Ihe Omuma Sayensi (ext. Url)
Feesgwọ ọrụ maka nhazi maka nhazi nke nhazi nke OSF - AfricArXiv na-aga n'ihu na ọrụ ya
bipụtara Jo Havemann on 14th nke February 2020 14th nke February 2020
'Ndị sava bọọlụ ama ama ama na-eche mmechi n'ihi nsogbu ego'
News Nature, 1 Feb 2020, doi: 10.1038/d41586-020-00363-3
Nke a bụ isiokwu nke ụnyaahụ akụkọ Nature nke ahụ lebara ụgwọ ọrụ ndị ọrụ OSF.
AfricArXiv no ebea!
Anyị na-aga n’ihu ọrụ anyị n’afọ 2020 niile, anyị na-arụkwa ọrụ na ụzọ na usoro ego iji kwado ọrụ maka afọ ndị ga-abịa wee dọnye AfricaArXiv na mpaghara mmepe Sayensị Open na-eto n’ihu Africa.
Anyị guzobere a peeji onyinye ebe a na weebụsaịtị anyị na mkpọsa igwe mmadụ jupụtara na ikpo okwu Opencollective.com.
Mepee mkpo bu ebe ikpo okwu ebe obodo nwere ike ichikota ma nyefee ego n’uzo, iji kwado ma too oru ha.
Onyinye gị ga-aga:
ekpuchi OSF hosting & ego mmezi
nhazi, ntinye, na akwukwo banyere oru na ndi AfricaArXiv
Nkwado njem iji gosipụta AfricaArXiv na nnọkọ
Nkọwa ole na ole ọzọ gbasara ọnọdụ ‘African’ anyị
Na June 2018, anyị bidoro AfricaArXiv site na ime ya na Center for Open Science ma nabatala ihe dị ka ederede mkpụrụ akwụkwọ dị nde 100 yana akwụkwọ mmado, akụkọ nwata akwụkwọ, na obere mkparịta ụka.
Maka afọ 2020, Center for Open Science gwara anyị ka anyị bulite US $ 999.- maka nkwado na mmezi nke akụrụngwa nke OSF ma na-akwado nkwado iji mata usoro dị iche iche na ntinye akwụkwọ idekọ ọnụ na mmekorita ha, dịka onyinye NSF na a kpọrọ site na Chan Zuckerberg Initiative.
Nkwuputa ụgwọ ahụ mere ka anyị nyochaa ntụle ọrụ na ụgwọ iji gwa onwe anyị ihe dị. N’oge na-adịghị anya, ọ bịara doo anya na anyị chọrọ inye ndị obodo anyị ihe karịrị otu ụzọ itinye ego n'ọrụ ha. Obi di anyi uto na COS maka ibido ulo anyi nke AfricaArXiv ma mee ka anyi bia ebe a. Oge abiala ka anyị too ma gbasaa mmekorita maka akụkụ dị iche iche nke Open Science na Open Access iji mee ka ha nwee ike mgbanwe na mgbanwe maka ndị nchọpụta na mpaghara Africa. Anyị chọrọ ịga n'ihu njem ahụ na COS na akụrụngwa nke OSF, nke na-enye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-abụghị naanị idekọ akwụkwọ ndebiri; ndi sayensi nwekwara ike hazie usoro oru ha na OSF tinyere daseti, ihe ndi n’edoro, na imeputa ihe.
Ugbu a anyị na-akwado ọrụ ndị anabataghị 100, ugbu a, ihe odide ụfọdụ, obere okwu ngosi, na akwụkwọ mmado.
Akwukwo oma ohuru nke n’ego banyere ihe achoro bu https://osf.io/preprints/africarxiv/y3bp7/ na ihe karịrị 1k nbudata
Ọ bụrụgodi na mgbalite dị nwayọ nwayọ, preprints na-enwetawanye ọfụma dịka usoro mgbakwunye na mbipụta akwụkwọ akụkọ. Anyị na ndị anyị na ha na-arụkọ ọrụ ka anyị gosipụtaara ndị nyocha Africa, ọkachasị, uru ha na-ewe iji nata nkwukọrịta sayensị n'ụwa niile.
Ọrụ na-efu ego, nke ahụ bụ eziokwu. Anyị ghọtara mkpa ọ bụ ihe ịma aka nye onye ọ bụla metụtara mana ọ dịkwa ezigbo ihe mmụta iji mee atụmatụ ihe ndepụta na-adigide site na mbido. Ka ntụgharị agụmakwụkwọ na-edozigharị onwe ya, ndị niile metụtara ya kwesịrị ịme mgbakọ na mwepụ ma chọpụta ụzọ kacha mma isi kesaa mmefu ego na onye na-akwụ ụgwọ maka ihe. Ewezuga ọnụ ahịa maka akụrụngwa ahụ, enwere ụgwọ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ na mmemme nhazi na mmezi, dịka maka ọrụ ndị etinyere na ikpo okwu nke ndị ọzọ nyere, HR, ahia wdg.
Ndị na-enye onyinye, nsogbu na ohere
Kemgbe anyị bidoro, anyị etinyela ihe aka anyị (oge na ego) maka iwulite ikpo okwu, gụnyere weebụsaịtị anyị ma gaa na ndị na-ege ntị. Anyị chere na ndị nyocha ekwesịghị ịbụ ndị na-akwụ ụgwọ maka ọrụ anyị, kama nke ahụ, anyị na-erute ọba akwụkwọ, gọọmentị, ntọala, na ndị na-enye onyinye - ma ndị Africa ma mba ụwa. Maka igwe mmadụ njupụta, anyị edobela onyinye onyinye na https://info.africarxiv.org/contribute/ na ị na-etolite usoro ego na usoro ụzọ maka 2020 na afọ ndị na-abịanụ.
N'ihi ọnọdụ ahụ siri ike na kọntinent ahụ, anyị eburula ụzọ nyochaa mmụta banyere ndị metụtara ya ma soro ndị ọkachamara dịgasị iche nwee mkparịta ụka. Anyị chọrọ imekọ ihe ọnụ na ndị Africa metụtara n'ụzọ kachasị mkpa na ịgbakwunye onyinye ego mba ụwa. Na Machị 2020, anyị na-ebido iwepụta mkpọsa igwe mmadụ anyị ma na-atụ anya ntinye nke onyinye ka anyị wee nwee ike ikpuchi mmefu anyị na-aga n'ihu gụnyere ego nke OSF maka 2020.
Onu ego amachitughi onu n’Afrika ma jikota uwa n’obere ulo. Dika nkwurita okwu ndi oka mmuta na-abanyegharia omuma na omume ndi Open Science on a global global anyi na-acho inwe olu siri ike ma jikota onu n’Afrika iji dozie nhazi ego - dika site na IOI - https://investinopen.org/.
Ihe ịma aka na ikpuchi mmefu
Zụ ahịa bụ ọtụtụ ọrụ ma tinye nnukwu ego maka njem na ọtụtụ awa etinyekwara ego iji hụ na ndị nrụtụ aka nyocha matara banyere uru akwụkwọ ego dị na ya nyere obodo nyocha. Nke ahụ abụghị naanị ikpe n'Africa, Latin America, na Asia mana ụwa niile. Ihe ịma aka ndị ọzọ dị na mpaghara gụnyere nsogbu ego, ụgwọ ọnwa dị ala maka ndị ọrụ HE na ụkọ akụrụngwa. Otutu ndi obodo na achotakwa oru ha na nzuputa ihe omimi ma nwechaghi aka ha ime oru di nkpa iji kpoo ego, nke n’onwe ya na ebe ozo bu oru oge nile maka ndi otu buru ibu.
Atụmatụ nkwado anyị ruo ugbu a
Agbakwunyere mmekorita anyi na Centre for Open Science iji mee ihe akụrụngwa nke OSF, anyị agbanweela ụzọ anyị site na mmekorita ya na Zenodo na ScienceOpen. Nke a na-eme ka ndị na-eme nchọpụta n'Africa họrọ oke akwụkwọ ndekọ aha nke mmasị na dabere n'ihe ha chọrọ:
Site na nke a, anyị ga-aga n’ihu na-agba mbọ ịhụ na ọrụ nzụkọ anyị ka dịịrị maka mpaghara ndị ọrụ nyocha nke Africa.
Edepụtara ọrụ na ọrụ ndị ọzọ akọwapụtara na uru ọ bụla dị n'elu ikpo okwu ọ bụla https://info.africarxiv.org/submit/.
Na Zenodo, anyị na-eji akaụntụ obodo bụ n'efu na-akwụ ụgwọ ma debe ya site na onye ọ bụla na isiokwu ọ bụla.
Anyị na ScienceOpen anyị nwere nkwekọrịta na anyị nwere ike iji akụrụngwa nke ihe ndozi ha n'efu na 2020 ma legharịa anya na njedebe nke afọ. N'elu ọnụ ụzọ ntinye, usoro ihe ndozi na ScienceOpen nwere ahaziri ọkwa ndị ọgbọ na-agbakọ agbakwunye nke na-agbakwunye ọkwa ọrụ ọzọ.
OSF na-enye maka ichekwa data nke usoro nyocha nke oru ngo. Ọ dịịrị ndị ọkà mmụta sayensị ịhọrọ ụdị ikpo okwu masịrị ha.
Na mmalite nke ọrụAAXXiv, ọhụụ anyị dị ogologo oge bụ imepụta ikpo okwu a na-ahụ maka mpaghara Afrịka, nke ọma na ụlọ ọrụ nyocha dị iche iche na mpaghara niile, iji hụ na njiri ihe nyocha nke Africa ma mee ka ndị nwere nsogbu nyocha Africa na itinye aka, mmekorita, na mgbanwo nke ihe omuma n’uwa zuru uwa.
Anyị na-agbaru mbọ maka mgbaru ọsọ ndị ọzọ, otu na ndị mmekọ iji mee ka nke a bụrụ ihe na-adịghị anya. Kpọtụrụ anyị ka anyị tinye aka.
Anyị guzobere a peeji onyinye na webụsaịtị anyị na onye ode akwụkwọ ikike Mepee mkpo mkpọsa nke igwe mmadụ.
N'ime izu ole na ole sochirinụ, anyị na-ebido izipụta atụmatụ dị iche iche iji soro ndị ọrụ aka na Researchlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Elu na Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Mmekọrịta maka ndị otu na nkwekọrịta mmekọrịta.
Kpọtụrụ anyị iji kpaa echiche na aro: info@africarxiv.org.
Tags: Center maka Open ScienceMepee Sayensị Sayensịego oru
Categories Họrọ Atiya Ihe omume (1) General (10) Languagedị Asụsụ (1) Mepee Mepee (9) Mepee Sayensi (8) Mbido (5) Na-ekwusara (4) Nkwukọrịta sayensị (3) Nrubeisi (4)
Akwukwo nri nke umuaka nke Africa AfricaOSH ASAPbio Berlin ike ikike Center maka Open Science ogbako Crastina Nchọpụta DIYbio Edinburgh Nchekwa nri IHECE11 IHECE2019 IGDORE asụsụ asụsụ dịgasị iche ụzọ imeghe Akwụkwọ Mepee oghere Mepee Ihe Ọmụma emeghe sayensị Emepe Science Conference Mepee Sayensị Sayensị Mepee Science Hardware osc2018 mmekorita Pearl Ihuoma Osirike Nyocha ndị ọgbọ akwusila ebipụta ScienceOpen Odide sayensị ego oru sayensị mmadụ nkwado TCC Africa ọzụzụ ubushakashatsi
Nzukọ AfricaOSH 2020
Laa azụ na Eprel 2018, echiche a ga-ewu ebe a na-echekwa ihe ga - emeghe African Open Access na nzukọ mbụ nke AfricaOSH na Kumasi, Ghana. Ejiri Nature Index, Quartz Africa kpuchie mmalite ahụ bụ Bekee. GỤKWUO…
Prọfesọ Mary Abukutsa-Onyanko na mbipụta akwụkwọ nchekwa na nri nri OA
Na mbido Disemba 2019, Ọkachamara Abukutsu-Onyanko gosipụtara ọrụ ya na UTC-SPARC Africa Open Access Symposium 2019 Symposium na Cape Town, South Africa. Lee ihe ngosi na Zenodo: Ihe dị ka afọ iri gara aga, Leslie Chan gbara ajụjụ ọnụ GỤKWUO…
FORCE2019: abmepụta ọhụụ maka nkwadebe maka ya
Edego blọgụ a sitere na ASAPbio ma degharịa ya n'okpuru ikikere CC-BY 4.0. Biko tinye okwu na nkọwa ọ bụla na mbụ post na asapbio.org/force2019-preprints-vision-dinner. Followinggbaso mkparita uka banyere “Onye ga-emetụta ihe ịga nke ọma nke GỤKWUO…
Idenye aha na ozi anyị site na ozi-e
Tinye adreesị email iji denye aha maka ozi anyị na Open Access na Africa ma nata ozi site email.